Wikipedia/wikitetikasa 2009/dinika - Wikipedia
Jereo ny lahatsoratra renin'ity sokajy ity any amin'ny pejy « wikipedia:wikitetikasa 2009 ».
Ny tanjona tamin'ny taona 2009 dia hanoratra lahatsoratra 2000 mahery eto amin'ny wikipedia malagasy, na hanoratra lahatsoratra tsaratsara mba hanintona ny mpamaky ; izany rehetra izany alohan'ny 31 Desambra 2009. Tsy takatra ilay tanjona : na ny fanoratana lahatsoratra tsaratsara (7%) na ny fanoratana lahatsoratra vaovao (1876 lahatsoratra voasoratra). Ny famaranana ity wikitetikasa ity dia izao : tsy nisy na vitsy dia vitsy ny fikambanana sy ny mpamaky eto amin'ny wikipedia. Izaho manokana dia hiezaka ary mbola hiezaka eto foana raha mbola tsy manana fikambanana tena fikambanana ny wikipedia malagasy --Jagwar grr... | 2 Janoary 2010 à 15:43 (UTC)
Ny wikitetikasa 2009 an'isa[hanova | hanova ny fango]
Tanjona tokony ho tratrarina
Ny lahatsoratra voasoratra na noforonina
Matratra na mihoatra ny 2 000 takelaka alohan'ny 31 Desambra 2009
Manoratra lahatsoratra tsaratsara 200 (eo ho eo)
Mampiditra sary na manisy sary amin'ny lahatsoratra efa misy
Tsy tratra ny 2 000 takelaka nandrasana (1875)
Tsy tratra ny 200 takelaka tsaratsara nandrasana noforonina
Ny lisitra ny lahatsoratra tokony ananan'ny wikipedia malagasy :
Jereo ny 1000 takelaka tokony misy.
Madagasikara : Ny tanànan'i Madagasikara, ny zava-misy sy zava-manirin'i Madagasikara.
Jeografia : Toe-tany, toetrandro, ranomasina, tanjona ...
Simia sy Fizika : Aratra, Atôma, rahona, rivotra, karbonina, oksizenina ...
Mila olona manana internet afaka mandray anjara izahay eto amin'ny wikipedia, raha te-hanoratra hianao dia manorata anarana ary manorata takelaka avy hatrany. Mahazo tsy manokatra kaonty koa ianao raha tsy tianao ho fantatra ny anaranao.
Manorata any amin'ny mpandrindran'ity wiki ity raha manana fanontaniana, raha tsy manana fotoana anoratana any amin'ny mpandrindra ianao dia jereo ny fanoroana ao amin'ny barre de navigation ao ankavia eo amin'ny fizarana « fanoroana sy fitsipika ».
Azo ampiasaina koa ny toerana iresahintsika ho an'ny fanontaniana maro samihafa momban'ny fandehanan'ny wikipedia, momban'ny syntaxe wiki, momban'ny fanatsarana ny rindrankajy mediawiki sns.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia/wikitetikasa_2009/dinika&oldid=41463"
Voaova farany tamin'ny 2 Janoary 2010 amin'ny 15:44 ity pejy ity.